VIDEO: Sidee Garoowe loogu soo dhaweeyay Madaxweyne ku-xigeenka Puntland (Daawo Sawirro) – Idil News
April 2, 2020 | Maxaa guuldarada Maraykanka ee Corona sababay?
VIDEO: Sidee Garoowe loogu soo dhaweeyay Madaxweyne ku-xigeenka Puntland (Daawo Sawirro)
Madaxweyne Ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo Wafti ballaaran oo uu hoggaaminayey ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Dowladda Puntland.
Madaxweyne Ku-xigeenka oo safar shaqo iyo mid khaas ahba ugu maqnaa dalka debeddiisa, gaar ahaan ahaan qaar kamida wadamada Qaaradda Yurub, waxaa soo dhawayntiisa ka qayb qaatay masuuliyiin kala duwan oo isugu jiray Goleyaasha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa sheegay in socdaalkiisu uu ka bilowday markii hore shirkii maalgashiga Puntland, isla markaana uu dalka Turkiga kaga qayb galay Shirka maalgashiga Turkiga ee Africa, Madaxweyne Karaash waxa uu tilmaamay sidoo kale inuu socdaal shaqo iyo mid khaas ah-ba ku maray dalal kale oo qaaradda Yurub ka tirsan.
Madaxweyne Ku-xigeenka ayaa xusay inuu la kulmay Jaaliyaddaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan qaar kamid ah dalalka Yurub, gaar ahaan kuwa Puntland oo si ballaaran u soo dhoweeyey Madaxweynaha, isla markaana uu la wadaagay horumarka ka socda Puntland iyo nabadgelyada dalka taalla, arrintaasi oo ay si wayn ula dhaceen, kuna bogaadiyeen dowladda.
Ugu dambayn, Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka Tacsiyeeyey dadkii ku dhintay waxyeelada Fatahaadda Wabiga Shabeelle, waxaaana uu bogaadiyay dedaalada gurmad ee ay bilaabeen shacabka Puntland, taas oo ah mid lagu yaqaan Puntland iyo shacabkeeda.